Laanqayrta Cas oo ka deyrineysa xaaladda degaanno ka mid ah Koofurta Itoobiya | allsaaxo online
Laanqayrta Cas oo ka deyrineysa xaaladda degaanno ka mid ah Koofurta Itoobiya
Published on July 13, 2018 by admin mahamuud · No Comments
Geneva- Hay’adda caalamiga ah ee Laanqayrta cas (ICRC) ayaa sheegtay in shaqaaqooyinka ka dhex taagan Shucuubta Ku dhaqan Koofurta Itoobiya ay sare usii qaadeyso dhibaatooyinka Bani’aadamnimo ee halkaasi ka jira.
Laanqayrta cas ayaa walaac ka muujisay iney xaalad adag soo food saarto in ka badan 800,000 oo Qof oo si qasab ah looga barakiciyay degaannadoodii, kuwaas oo aan haysan Hooy, Cunto, Biyo nadiif ah iyo waxyaabo kale oo aasaasi u ah nolosha Aadanaha.
Xubno ka socda Hay’adda Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas iyo Isku tallaabta Cas ee Itoobiya ayaa dhowaan si wada jir ah u booqday Degmada Kochere oo ka mid ah goobaha ugu badan ee ay Dadka ku bara kaceen.
Shirin Hanafieh, oo ah Sarkaal ka tirsan hay’adda ICRC ayaa sheegay inaan loo baahnayn inay Beesha caalamku iska Indha tirto ama fududeysato dhibaatada Bini’aaddannimo ee halkaasi ka taagan.
Qayla dhaantan kasoo baxday hay’adda Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas (ICRC) ayaa kusoo beegmaysa xilli ay shaqaaqooyin kuwaa la mid ihi ka taagan yihiin degaanka Mooyaale ee Gobolka Liibaan Itoobiya, halkaasoo ay ku dagaallamayaan Qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada.